Daawo..Ugu Dambeyn Jeesow Iyo Mareykanka..! | Xaqiiqonews
Daawo..Ugu Dambeyn Jeesow Iyo Mareykanka..!
Sharci ahaan sax ma ma ahan in madaxweyne maamul goboleed lagu magacaabo digareeto ayuu yiri Jeesow, oo warqadii lagu aqoonsaday Axmed madoobe ku tilmaamay “mid dhaawaceysa shacabka”.
Xil.Jeesow oo shir jaraa’id kaga hadlay aqoonsiga DF-ka ee Axmed Madoobe ayaa eedeyn u jeediyey muwaadiniin Mareykan ah oo uu ka mid yahihiin ergayga qaramada midoobay james Swan iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto, kuwaasi oo sida uu sheegay soo farageliyey “hogaamintii dalka”
“Sharci ahaan sax ma ma ahan in madaxweyne maamul goboleed lagu magacaabo digareeto” ayuu yiri Jeesow, oo warqadii lagu aqoonsaday Axmed madoobe ku tilmaamay “mid dhaawaceysa shacabka”.
Jeesow ayaa intaasi ku daray “Madaxweyne madaxweyne kale ma magacaabo” isagoo tilmaamay in warqadii aqoonsiga ee Jubbland ay jebisay qodob dastuuri ah.
Daahir Amin Jeesow ayaa sheegay in Yamamoto uu indhaha ka soo ridaaayo dimuqaraadiyadda uu Mareykanka buunbuunin jiray, waxa uuna ku goodiyey in Mareykanka aan Soomaaliya laga soo dhaweyn doonin.
Siyaasadda Mareykana uu kula dhaqmaayo Soomaaliya tan iyo burburkii waa siyasadda labada waji ee “double face policy”, anaga-hadii aan nahay shacabka Soomaaliyeed- waxaa nahay dadka ugu badan ee fahmi kara hal ku dhigga Mareykanka ee ah “mudnaantu Waa Mareykanka “American First”.